Ọkachamara Semalt na-akọwa Ntuziaka Nchekwa Iji Wepu Rootkit.TDSS.v2 Trojan
Rootkit.TDSS.v2 Trojan bụ nje na-awakpo kọmputa, faịlụ ntanetị dị mkpama tinye onwe ya n'enweghị ikike nke onye ọrụ - cheap vps hosting unmetered bandwidth. Ndị mmepe nke nje ahụ, nwere ike imepụta atụmatụ ndị na-enye ya ohere izerenchọpụta site na mmemme antivirus. Ya mere, iji kpochapụ ọrịa ahụ site na kọmputa ahụ, otu ga-eme ya na aka n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ọ bụrụ na antivirus na-achịkwa ịchọpụta ịdị adị ya, ndị ọrụ ekwesịghị ịkpagbu ịchọngwaọrụ mwepụ dị ka ọ ga-abụ na ọ gaghị arụ ọrụ. Onye ọkachamara nke Ọkachamara Ọrụ Digital, George Forrest, na-adụ ọdụ ka a kpochapụ nje ahụ ngwa ngwa iji gbochie mmebi nke usoro ahụ. N'okpuru ọ na-enye anduzi siri ike na esi ewepụ nje ahụ.
E nwere ọtụtụ ebe ebe mmadụ nwere ike ịbanye na Trojan Rootkit.TDSS.v2 Trojanvirus na ịntanetị. Ndị nkịtị bụ na ịpị na njikọ ndị na-amaghị, ebe nrụọrụ weebụ hacked, email spam, ma ọ bụ mmemme nke atọ ndị ọzọ.Ihe mere ndị na-agba ọsọ na-eji Trojan eme ihe n'ime kọmputa nke onye ọrụ bụ imebi faịlụ ndị dị na ya, ma na-ezipụ site na ozi njedebemgbe ị na-eme otú ahụ na usoro. Ndị na-agba ọsọ na-eji Rootkit.TDSS.v2 Trojan, ndị na-eme ihe nchịkọta iji nweta kọmputa ntanetị.
Site n'ikike ịgbanwe usoro sistemụ arụmọrụ, ọ gaghị ekwe omumeiji wepụ nje ahụ site na iji antivirus ma ọ bụ wepu ya site na nchịkwa nchịkwa. Ihe ndị ọzọ metụtara nje ahụ bụ ọtụtụ mgbasa oziegosi na ihe nchọgharị kọmputa, na ọtụtụ redirections. Kọmputa ga-amalite usoro ọsọ ọsọ karịa ka ọ dị.
Ihe si na Rootkit.TDSS.v2 Trojan
Nje virus nwere ike ịmelata ọrụ PC. Ịbawanye egwunke nje ahụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, ga - ebute PC mgbe ụfọdụ. Ọ naghị enyere ọnọdụ ahụ na-egbochi nje virus nanị ịchọtaọnụnọ ya, ma ọ bụghị iwepu ya kpamkpam. Site na njirimara dị otú a arụnyere, ọ ga-abụ na ọ ga-anọgide na-emebi faịlụ na PC.Ọ na-aga n'ihu na-eme ka usoro nchekwa na nchekwa na-ebelata. Site n'inwe ike ikwurịta okwu na sava weebụ, enwere eluenwere ike ha ga-anọgide na-wụnye malware ndị ọzọ na PC ahụ ebuteworo..Na usoro, ọ na-ewe ọtụtụ nzụliteakụ na ụba nke mere na ọ na-akpata nzaghachi ngwa ngwa. N'ikpeazụ, ọ na-anakọta ozi nzuzo niile echedoghi banyere onye ọrụ ahụ.
Esi Wepụ Rootkit.TDSS.v2 Trojan Ọma
Na-enweghị ezigbo ihe ọmụma banyere virus ahụ, Rootkit.TDSS.v2 Trojan nwere ike dị nnọọ ize ndụ.N'ihi ọdịdị ọjọọ nke nje ahụ, ọ dị mkpa ka igwu wee banye n'ime ihe kpatara nsogbu ahụ. Otú ọ dị, otu ihe mmadụ kwesịrị ịma bụna ngwa ngwa nke nzaghachi, ohere dị elu nke ịchekwa ụfọdụ faịlụ kọmputa ma ọ bụ ozi. Enwere ụzọ atọndị ọrụ nwere ike iji hichapụ Trojan kpamkpam.
Usoro 1 : Iji SpyHunter, ihe nkesa nje virus, nke a na-ebudata online
Ọ gụnyere ibudata usoro ihe omume ahụ n'ịntanetị, nyochaa kọmputa niile maka njehie ọ bụla,họta faịlụ ozo achọtara mgbe nyochachara, wepu ha.
Usoro 2 : Iwepụ akwụkwọ nke Trojan
1. Na windo 8, wepụ ya na ọnọdụ dị mma site na ịpị bọtịnụ Windows + C.Wee pịa ike, ijide bọtịnụ ike ma malitegharịa. Họrọ nsogbu, nhọrọ dị elu, họrọ mmalite mmalite ma malitegharịa.Ozugbo ọ gaghachiri, họrọ nọmba 5 iji mee ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịmalite ịkwanye ọnọdụ.
Na windo 7 ma ọ bụ na mbụ, iji mepee ọnọdụ dị mma, otu ga-agbanye ma pịa F8, nke ga-emeweghachite menu dika nke egosiri n'elu.
2. Gbaa usoro "mmalite" na ịnyagharịa na usoro ihe nchọta na faịlụ ma wepụ faịlụ ndị nje.
3. Ọzọkwa, na nchịkọta akụkọ, hichapụ ihe niile edepụtara metụtara nje ahụ.
4. Wepụ nje ahụ site na ndị nchọgharị.
Usoro 3 : Ịrụ usoro weghachite iji wepu Rootkit.TDSS.v2 Trojan
N'okpuru nhọrọ dị elu na nchịkwa nchịkwa, họrọ usoro nchebe taabụ,họrọ usoro weghachite. Onye kwesiri ịhọrọ ebe weghachite wee mechie.
Mgbe ịmechara nke a, bulie PC site n'ibudata Advanced PC Fixer ma mee ya iji dozie njehie ndekọ.